Jery taratra… herinandro : mihasarotra ny fiainam-bahoaka | NewsMada
Jery taratra… herinandro : mihasarotra ny fiainam-bahoaka
Ifandroritana ny fampidirana mpianatra manoloana ny fihanaky ny pesta. Nampiditra ny mpianatra ny Fitantanana diosezianin’ny fampianarana katolika. Misy ny tsy nanaraka. Mizarazara koa ny sekoly tsy miankina: miandry ny 6 novambra toy ny an’ny FJKM, na nanomboka ny azy.
Lasa adihevitra ny amin’izay hetsika azo atao na tsia noho ny fihanaky ny pesta: rehefa inona, ohatra, na ahoana, na iza no mikarakara azy vao azo atao? Voalaza fa efa misy ny fepetra apetraka mialoha sy arahina. Nilaza ny minisitry ny Fizahantany fa efa mitsahatra ny pesta ao Toamasina.
Voizin’ny mpitondra izao fa tsy nilaza hoe hanao fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana lalàmpanorenena ny filohan’ny Repoblika. Adihevitra no hoe aroso amin’izany. Tsy efa saika samy naneho ny fijeriny ve, ohatra, ny mpanao politika, ny firaisamonina sivily, ny fiombonambe iraisam-pirenena?
Nilaza ny DFP fa tsy hitondra inona ny dinika momba ny lalàmpanorenana, famerezan-dia ny vahoaka hanemorana ny fifidianana 2018. Hanolotra kandidà amin’ny fifidianana ny DFP, fa nampifandrori-kevitra amin’ny vahoaka sy ny mpiara-miombon’antoka hatrany ny mpitondra tato ho ato.
Nisy ny fakan-kevitra ireo mpisehatra amin’ny fanatsarana ny lalàm-pifidianana, miainga amin’ny asan’ny vaomiera iraisan’ny minisitera. Eo ny fanahiana fanemorana ny fifidianana amin’izany. Mety tsy ho tratra amin’izao fivorian’ny Antenimiera roa tonta izao ny fandaniana azy.
Nahatratra 300 any ho any ireo Malagasy am-pielezana any ivelany no tonga amin’ny fihaonambe mandritra ny hateloana. Anisan’ny dinihina amin’izany ny ho anjaran’izy ireo amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara, ny fahazoana mandray anjara amin’ny fifidianana…
Nilaza ny eo anivon’ny minisiteran’ny Varotra fa tonga ny vary avy any ivelany. Tokony hiverina amin’ny teo aloha ny vidim-bary: 1 400 Ar ny kilao, tsy mihoatra ny 450 Ar ny kapoaka. Efa misy tratra ny mpamongady manafim-bary, ary mandeha ny fampiharan-dalàna.
Amin’izany rehetra izany, mihasarotra ny fiainam-bahoaka. Tsy hita izay fiovan’ny tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, ady tany…